[BADBAADO] Beenta ku saabsan Sirdoonka Cilmiga ah
Inicio/Sirdhaad dabiici ah/5 Been Oo Ku Saabsan Sirdoonka Artifishalka
0 3.143 2 daqiiqo akhri
Warbixinnada Gartner waxay soo ururiyeen khuraafaad badan iyo fikrado khaldan oo ku saabsan AI.
Shirkadda cilmibaarista iyo la-talinta ee Gartner ayaa baartay oo ku guuleysatay inay daabacdo doodo badan oo khaldan oo ku saabsan sirdoonka farsamada, iyadoo soo bandhigtay su'aalo kala duwan oo ku saabsan horumarinteeda shirkadaha waaweyn ee adduunka. Awood u lahaanshada tirinta beenta ku saabsan sirdoon macmal ah inay awood u yeelan doonaan inay indhaha nooga furaan kuwayaga runta rumeeyey ee aan ahayn.
Hogaamiyaasha suuqa ganacsiga waxay kujiraan xaalad hubanti la'aan ah oo ku saabsan isticmaalka IA ganacsigooda ama shirkadaha dhexdooda. Waxaa jira jahwareer badan oo ku saabsan iskaashiga AI ee abaabulka shaqada taasna waxay ku keenaysaa iyaga inay shuruud ku xidhaan fikradaha qaldan ee dadka qaar qabaan.
Waa maxay xogta khaldan lagu soo koobi karo shan been kaas oo hormood ka ah dhamaan macluumaadka khaldan ee jira ee ku saabsan caqliga macmalka ah ee si fudud loo beenin karo.
Beenta ku saabsan Sirdoonka Artifishalku waa sida soo socota:
1 "Hawlgalka AI wuxuu la mid yahay Maskaxda Aadanaha" AI waxaa loo tixgeliyaa anshax injineernimada kombiyuutarka. Maanta waxaa loo tixgeliyaa nidaam qalab software ah oo loogu talagalay xallinta dhibaatooyinka. Sidaa darteed, si ka duwan maskaxda oo aad u adag, AI waa edbinta kombiyuutarka.
2 Uma baahnid kuwa kale, mashiinadan ayaa ururiya aqoontooda kaligood. Soosaarida mashiin ama nidaam leh AI waxay ubaahantahay faragalinta aadanaha. Tani waxay u oggolaaneysaa saynisyahannada inay ka yimaadaan ku lug lahaanshaha xogta aadanaha.
3 "AI way ka madax banaan tahay eexashada." Mawduuca AI wuxuu ku saleysan yahay xogta, macluumaadka, jaangooyooyinka iyo talooyinka kale ee aadanaha. Nidaamkani wuxuu si weyn u yareyn karaa eexashada xulashada, laakiin gabi ahaanba kama baabi'in karo.
4 "AI waxay beddeli doontaa oo keliya shaqooyinka soo noqnoqda ee aan u baahnayn shahaadooyin." AI waxay u oggolaaneysaa shirkadaha inay gaaraan go'aanno macquul ah sidoo kale waxay u oggolaaneysaa inay beddelaan howlaha aasaasiga ah laakiin isla mar ahaantaana waxay kordhiyaan hawlo adag oo u baahan karti iyo xirfad weyn sida aadanaha.
5 "Dhammaan shirkadaha uma baahna AI." Dhammaan shirkadaha waxay tixgelinayaan saameynta ay AI ku leedahay da'da casriga ah.
Sida loo ogaado khayaanada bangiga mahadsanid AI
Anshaxa IT Gartner Sirdhaad dabiici ah Sirdoonka macmalka ah